हेर्नुहोस् त सपनामा के देखे कस्तो हुन्छ ?
निन्द्रामा आउने आवाज, चित्र वा भावनाको अनुभव हुनु नै सपना हो । मानिस सुतिरहेको बेलामा मानिसको दिमागमा एक चरणमा पुगेपछि तस्बिर, शब्द आदिको भ्रमजस्तो दिमागमा पैदा हुन्छ त्यो नै सपना हो ।
निन्द्रामा देखेको सपनाको कुराहरु मानिसको जीवनसंग सम्बन्धित हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ । मानिसहरुले जे कुरा सुत्ने बेलामा सोचेर सुत्छ, त्यहि कुराको बारेमा सपना देख्छ भन्ने पनि मान्यता रहेको छ । एक रातमा चार प्रहर हुन्छ भनिएको छ । पहिलो प्रहर , दोस्रो प्रहर ,तेस्रो प्रहर र चौथो प्रहर । चौंथो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल पन्ध्र दिनमा प्राप्त हुन्छ ।
यो सबै सपनामा देखिने कुराहरु मानिसको जीवनसंग सम्बन्धित पनि हुन्छ सक्छ र नहुन पनि सक्छ । कोही कोहीको सपना लामो हुन्छ भने कतिले देख्ने सपना एकदम छोटो पनि हुन्छ । कहिलकाहीँ सपनामा देखेको, सुनेको, तथा अनुभव गरेको कुराहरु निन्द्राबाट बिउजेपछि याद नहुने, र याद भए पनि एक्दैमै मन्द यादहरु रहने गर्दछ । यो वैज्ञानिकहरुले अनुमान लगाएका छन् ।
के सपनका देखे के हुन्छ त ?
जल–पूर्ण घडा, ब्रहण, बल्दो आगो, फूल उत्तम घर, सेतो धान, नटुला सपनामा देखिए धन लाभ हुनेछ । सपनामा गाई, घ्यू, नर देखियो भने पुन्य कार्य हुनेछ । इच्छित कार्य सफल हुने तथा धन लाभ हुनेछ ।कमलको पातमा दही, घ्यू, केहि मिष्ठान्न आदि कुनै नदिको तटमा बसेर खाएको देखेमा उच्च पोष्ट तथ कार्यकारी पद पाइनेछ ।
सपनामा हात्ती, घोडा, गाई, पर्वत, तरवार, देवल तथा रुख चढेको देखियो भने अथवा त्यही बसेर केहि खायो भने, रोएको देख्यो वा धन कसैलाई दिएको देख्यो भने, हातमा विणा लिएको देख्यो भने विपनामा भूमि लाभ हुनेछ । धन उधारो देखे – अत्यधिक धन प्राप्ति हुन्छ ।
त्यस्तै चन्द्रमा देखे – सम्मान मिल्ने, चांदी देखे – धन लाभ हुने, खेतमा पाकेको गहु देखे – धन लाभ, फलफूल खाएको देखे – धन लाभ, चश्मा लागेको देखे – ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ । रातो फूल देखे – भाग्य चम्कन सक्ने, सेतो फूल देखे – कुनै समस्याबाट छुटकारा पाउने , सेतो सर्पले टोकेको देखे – धन प्राप्ति हुने , नदीको पानी पिएको देखे – सरकारको लाभ हुने , रोटी खाएको देखे -धन लाभ वा राजयोग प्राप्त हुन्छ । भने कपास देखे – निरोगी हुने, कुकुर देखे -पुरानो मित्रसंग मिलन हुन्छ भनेर ज्योतिषशास्त्रमा भनिएको छ ।
हामीमध्ये धेरैले महिलामाथि हुने अनेक प्रकारका घरेलु हिंसाको घटनाका बारेमा…
काठमाडौं । जीवनको पवित्र सम्बन्धमध्येमा पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध पनि…